Indlela engcono kakhulu yokuhamba usuka e-Amsterdam eya eBerlin ngesitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Indlela engcono kakhulu yokuhamba usuka e-Amsterdam eya eBerlin ngesitimela
(Kugcine ukubuyekezwa On: 15/05/2020)
Ukuhamba usuka e-Amsterdam uye eBerlin ngesitimela kunikeza umhambi okuhlangenwe nakho okungalibaleki nokukhetha okuhle kakhulu kwe-Eco. Nakuba lwamahora ayisithupha kancane kancane, induduzo olunikezwa izitimela charm uhambo ivelele. nge nezindawo ezinhle endleleni, futhi imoto yokudlela ukusiza kudlule isikhathi, uhambo ugcina ngokuba isheshe kunokulindelekile. Nakhu izitimela eYurophu okunikezwayo kule umzila.
Lapho ngifika esikhumulweni yesimanje Hauptbahnhof (HbF) lapho usuka e-Amsterdam usiya eBerlin noma eBerlin uye e-Amsterdam ngesitimela, kunzima ukungacasuki bazijabulele uhambo eseza. Isiteshi isakhiwo steel nge izibuya eziningana, lapho izitimela uwele ikhanda lakho ngokusebenzisa komzila okwesikhashana. It is kahle kakhulu exhunywe kwi-enye ingxenye yomuzi ngokusebenzisa emigqeni kamasipala ibhasi esiteshini, maphakathi Berlin. Uma ungazange ibibhukelwe yokuhlala e Berlin, kukho okuhle umzuzu nje kude esiteshini iyona kwamadolobha Ihhotela.
Berlin To Amsterdam Ngesitimela
Lapho usuka e-Amsterdam uye eBerlin ngesitimela, ufaka abadumile Central Station Amsterdam, sezakhiwo izifanekiselo kakhulu edolobheni, kanye airport Schipol. kalula, le Central Station lakhiwa 1889, futhi namuhla uthola mayelana 250,000 abagibeli ngelanga. Isiteshi is signposted kahle. Uma ungakhulumi Dutch, vele ukhumbule ukuthi igama lesikhulumi “ithrekhi”. Uma kunesidingo, ungakwazi lixoxa isiNgisi, kusukela abasebenzi esiteshini ukhuluma ulimi. e-Amsterdam, ungumuntu omuhle yokuhlala eduze esiteshini central iyona Ibis isitayela. Lapho, indawo uphelele ngoba siteshi sesitimela ilungelo maphakathi, eduze ezindaweni ezithakazelisayo.
IBrussels eya e-Amsterdam ithikithi lesitimela
ILondon ukuya e-Amsterdam ithikithi lesitimela
Amsterdam ukuya Berlin ithikithi lesitimela
I-Paris eya e-Amsterdam ithikithi lesitimela
Amsterdam Ukuze Berlin ngu zemininingwane
Inkonzo yesitimela yase-Amsterdam eya eBerlin ngesitimela imvamisa kakhulu, futhi kukhona cishe ezimbili izitimela ngehora. Iningi izitimela usuku anikele inkonzo ukhululekile kakhulu, kodwa kancane kancane, njengoba ayeke emadolobheni amaningana endleleni. Isitimela sokuqala kusukela Amsterdam Berlin isuka ngo 6:58 am, Lapho efika inhlokodolobha German at 13:20. Kusukela Berlin Amsterdam, isitimela sokuqala isuka ngo 06:37 futhi efika 13:08. Ingxenye ehamba phambili uhambo emini, ngaphandle kokungabaza, iyona namathafa. emadolobheni amancane emaqaqasini eJalimane naseNetherlands, kanye izintaba namathafa yasemakhaya, baqiniseka obumangalisayo!
I-Amsterdam eya eBrussels ithikithi lesitimela
I-Amsterdam eya eLondon ithikithi lesitimela
I-Berlin iya e-Amsterdam ithikithi lesitimela
I-Amsterdam ithikithi lesitimela laseParis
Izinketho zihlalo esitimeleni kusukela Amsterdam Berlin zahlukahlukene. Lezi amabanga kusuka izihlalo ezivamile kumakhabheni-moya ube izihlalo ababehlezi ngisho ukuguqulela imibhede. Kusukela uhambo lide, ukuhamba ngenye yalezi apholile, alinikela okungeziwe ezifana ukukhanya, isilawuli lokushisa kanye Imigudu for laptops nomakhalekhukhwini, okwenza kube nokwenzeka ukuba ubuke ama-movie induduzo gumbi yakho phakathi nawo wonke uhambo. Khumbula ukuthi ngithenge amanye amathikithi yakho okungenani amasonto amabili kusengaphambili ukuze uqiniseke akunankinga kwenzeka.
Singabantu kakhulu nakanjani uyaqiniseka ukuthi ngeke simdumise ride kusukela Amsterdam Berlin, futhi okuphambene nalokho. Yebo, kuyoba olunye uhambo ngoba uma kuzame okokuqala, uyohlale ufuna uthatha isitimela futhi ngokugcwele ukujabulela uhambo.
Ngakho, ingabe ukulungele travel isitimela phakathi kweNetherlands neGerman ngesitimela? uma kunjalo hlela amathikithi akho wesitimela nathi 3 amaminithi, at the rates eshibhe futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/amsterdam-berlin-train/- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / nl noma / futhi ngezilimi ezingaphezu / de ukuze.
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelamsterdam travelberlin travelgermany travelnetherlands traveltips